Vaovao - Tamin'ny 26 aprily, natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Shanghai Multinational Sourcing Convention and Exhibition Center ny Fampirantiana ho an'ny olon-dehibe Shanghai 2019!
Lehibe kokoa ny refin'ity taona ity, miaraka amina orinasa mampientanentana mihoatra ny 300 mandray anjara, ary voalamina tanteraka ny rihana fahatelo amin'ny efitrano fampirantiana! Ny orinasa vahiny dia nalamina ihany koa teo amin'ny sehatry ny fampirantiana iraisam-pirenena hanenjana ny elanelana misy eo amin'ny mpihaino sy ny marika iraisam-pirenena.
Ireo mpampiranty an-tokatrano dia orinasam-pitaovana, kojakojam-pianakaviana ary solika fanondrahana, ary betsaka ihany koa ireo orinasa mpanao saribakoly tonga nanatrika ilay fampirantiana. Ho fanampin'izay, misy vokatra maro toy ny SM sy bundle, ary ny fomba haingo amin'ny trano heva dia avo lenta tokoa!
Ny isan'ny mpitsidika matihanina ny Fampirantiana ho an'ny olon-dehibe Shanghai tamin'ny taona 2018 dia nahatratra rakitsoratra iray, nahatratra 8.321, anisan'izany ireo mpitsidika matihanina 6191 ary mpitsidika matihanina 2.130 any ivelany. Ny "matihanina avo lenta" dia filozofian'ny Fampirantiana ny vokatra ho an'ny olon-dehibe any Shanghai. Tamin'ny taona 2018, ny fampirantiana dia nanangana faritra fampirantiana iraisam-pirenena ary nahazo valiny avo lenta avy amina vokatra marobe ho an'ny olon-dehibe malaza eran-tany, izay tsy vitan'ny fampiroboroboana ny fifandraisana lalina eo amin'ny indostrian'ny vokatra ho an'ny olon-dehibe eto an-toerana sy manome vokatra avo lenta kokoa ho an'ny mpitsidika fampirantiana.
Amin'ny taona 2019, ny Shanghai Exhibition ho an'ny olon-dehibe dia hanohy hitandrina ny "fanamafisana ny filan'ny fampiratiana, hanaja ny tolo-kevitr'ireo mpividy" hanohy hampitombo ny ezaka fanaovana dokambarotra anatiny sy iraisam-pirenena, ary hiezaka ny hanasa marika iraisam-pirenena maro kokoa handray anjara amin'ny Shanghai hanome vokatra kalitao bebe kokoa ho an'ny mpividy an-trano; Mandritra izany fotoana izany dia hanao izay fara herintsika koa izahay hanasana ireo mpividy manerantany ho tonga any Shanghai hanao fampirantiana ary hanome mpanjifa manana kalitao bebe kokoa ho an'ireo mpampiranty lehibe
Vokatra ho an'ny olon-dehibe
Fitaovana ho an'ny olon-dehibe, atin'akanjo fanaovana firaisana, vatomamy manao firaisana, vokatra SM, menaka manosotra, famonoana otrikaina, fanosotra, famaohana, fitaovana fanitsiana ny fanaovana firaisana ara-nofo, ranon-javatra fanemorana, vokatra ronono hatsaran-tarehy;
Vokatra fahasalamana miteraka
Sakafo mahavelona voafehy ara-nofo, vokatra fitsaboana hatsaran-tarehy amin'ny fiterahana, hopitaly hatsaran-tarehy sy hatsaran-tarehy, diagnostika ary fidirana an-tsehatra, vokatra fitaovana fitsaboana;
Fimailo, pilina fanabeazana aizana, fitaovam-piterahana;
Fotoana fandefasana: Apr-27-2020
Vibrator G-Spot, Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo ho an'ny olon-dehibe, Silibratera Vibrator, Vibrator klitoraly, vibrator bitro, Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy,